September 25, 2008, 4:36 pm Filed under: Best Wishes ညဦးလေပြေက တသွင်သွင်တိုက်ခတ်လျက် ပူစပ်ခြင်းနှင့်အေးမြခြင်းများ အချိုးကျပေါင်းစပ် အသက်ဝင်နေသော လှပသော ညတစ်ည .. ။ ကျွန်းတစ်ကျွန်းတစ်နေရာ အဖြူရောင်အိမ်ကလေးတစ်ခုမှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနေနိုင်လောက်ပြီဖြစ်သော ချစ်သူအကြောင်းကို ကျွန်မ သတိရခြင်းများဖြင့် ပိုမိုတွေးနေမိသည်။ ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များက မနေ့တစ်နေ့ကလို ထင်ရပေမယ့် နက်ရှိုင်းသော ရင်တွင်းတစ်နေရာ အသဲနှလုံးထောင့်မှာ ဖြစ်ပျက်မှုများအားလုံးက ပူနွေးသစ်လွင်စွာ ထင်ဟပ်နေဆဲ .. ။ ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်ခြင်းများဖြင့် စတင်ဖွဲ့တည်ခဲ့သော လေးနက်သောခံစားမှုတစ်စုံနောက်ကွယ်မှာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များက (၂)နှစ်တာ ကာလအတွင်း သိပ်မနည်းခဲ့။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ခရေပင်လမ်းကလေးကိုကြည့်စဉ် မျက်ဝန်းထဲမှာ အကြင်နာလွှမ်းခြုံသော နွေးထွေးပျော်ရွှင်မှုများက တဖြေးဖြေးနေရာယူလာသည် .. ။ လေးနက်ခိုင်မာစွာ တွဲထားသော လက်တစ်စုံက ရံဖန်ရံခါ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အစိုင်အခဲများကို အကြိမ်ကြိမ်ကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့သည် .. ။ ပြင်းထန်သော စိတ်ဗီဇပိုင်ဆိုင်သူနှစ်ဦးအတွက် အေးချမ်းခြင်းဆိုသော မေတ္တာတရားကို ခိုင်မြဲသောချစ်ခြင်းကြောင့်သာ ကြိုးစားတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည် .. ။ ဘ၀မှာ အကျေနပ်ဆုံးအရာတစ်ခုကို ပြပါဆိုလျင် ကျွန်မ၏နှလုံးသားတစ်စုံကို ဖော်ထုတ်ပြရလိမ့်မည် .. ။
`လူ့ဘ၀ကို အစပြုခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ရက်မှ ရာသက်ပန် တစ်သက်လုံး အကြင်နာမေတ္တာ ၊ ငြိမ်းချမ်းမှု ၊ အောင်မြင်မှု ၊ စစ်မှန်သော ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုများကို ကျန်းမာပျော်ရွှင် သာယာချမ်းမြေ့စွာ ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါစေ ချစ်သူ .. ´Happy Birthday Ko Ko.
With Lots Of Love From Me To Say .. Have A Wonderful Birthday🙂
ညီးမလင်းလက်ရေ မလာတာကြာလို့မဖတ်ရသေးတာတွေအကြွေးတင်နေတာ အခုတောံအကုန်ပြီးအောင်ဖတ်သွားပြီးနော် လွန်းထားထားလဲီးလေးကြိုက်တယ် အခုမှသာမဖတ်တော့တာ အရင်ကဆိုပေါ်တိုင်းဖတ်တယ် ….း))ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့ကိုဒီနှစ်မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ညီမနဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်စွာပြုလုပ်သွားနိုင်ပါစေ ခင်မင်လျက် မီးလေးps..မီးလေးဆီလဲလာလည်ဦးနော်အခုဘလော့ခ်ရေးနေပြီး…း))http://khaingthinzar.blogspot.com
Comment by flowerworld
September 26, 2008 @ 9:44 am Reply	နှစ်ယောက်စလုံး အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ
September 27, 2008 @ 12:57 pm Reply	ပျာ်ရွှင်ရင်ခုန်ခြင်းများဖြင့် စတင်ဖွဲ့တည်ခဲ့သော လေးနက်သောခံစားမှုတစ်စုံနောက်ကွယ်မှာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များက (၂)နှစ်တာ ကာလအတွင်း သိပ်မနည်းခဲ့။
October 6, 2008 @ 6:03 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI